Linux iri kuve yakajairwa system yemota | Linux Vakapindwa muropa
Chete mamwe mabhurani akaita seCadillac uye Tesla Motors vakashandisa Linux kune mamwe masisitimu mumota dzavo, asi akawanda uye akawanda mabhenji ari kusarudza iyo Linux kernel yemota dzavo. Muchokwadi, iyo Linux Foundation yakabheja zvine simba pane ino nyowani chikamu chemotokari dzakabatana nekugadzira pasi payo amburera iyo AGL (YeMotokari Giredhi Linux), yakavhurwa sosi purojekiti yekumisikidza yakavhurika sisitimu uye inoshanda sisitimu yemota dzese mhando.
Izvi zvakatanga muna 2012 uye zvauya nenzira yakareba kubva ipapo, ne nhengo dzekuda kweToyota (uye Lexus zviri pachena), inova ndiyo inogadzira mota hombe pasirese, uye vamwe vakaita saFijitsu, HARMAN, NVIDIA, Renesas, Samsung, Texas Instruments, Nissan, Jaguar Land Rover, DENSO, Mazda, Panasonic, Suzuki, Honda, Amazon , NTT Dhata, Mercedes Benz, Pioneer, Qualcomm, Mitsubishi Electric, Adobe, ARM, Collabora, Eureka, Hitachi, Hyundai, Intel, LG, NEC, Microchip, Mediatek, SiFive, NXP, Oracle, Sony, Subaru, Toshiba, Synopsys, Qt, Trend Micro, uye yakareba kwazvo etc. ziso! Uye kuti chiratidzo hachizi pano hazvireve kuti hachishande pamwe kana kuti hachi chishandise, chete kuti kubatanidzwa kwacho hakusi kukuru.
Sezvo iwe uchiziva, Linux haisati yakunda iyo yega chikamu chinosara kutonga, sezvo mamwe ese ari akazara kwazvo neayo. Zvinopesana kuti rakagadzirwa chaizvo kune chikamu chisingatonge, tafura. Panzvimbo iyoyo, yakatsvaira maseva, makomputa, zvigadzirwa zvakadzamirwa, nharembozha, zvishandiso zvitsva zveIoT, indasitiri, uye mamwe masosi senge atiri kubata nawo nhasi, eayo akabatana mota.
Midziyo yemumba, materevhizheni, zvombo, mota, zvipfeko ... chokwadi ndechekuti Linux iri kwese kwese., Zvishoma pama desktops evashandisi uye malaptop ndiko kwazvinofanira kuve. Kune rimwe divi, mune ino pfungwa, iwe unongowana mashoma makota ekuti zvichienderana nehuwandu hwaunotarisa, oscillate pakati pe2 ne4% mune ine tariro kesi, uye nekuwedzera ChromeOS saizvozvo. Kune rimwe divi, vakwikwidzi vayo vakaita seMacOS neWindows, vanowana manhamba ari padhuze ne10% uye anopfuura makumi masere muzana eMicrosoft.
Mubvunzo unomuka ndewokuti: zvakakosha here izvozvo Linux inotonga PC uine simba rese iro Linux rine? Zvakanaka, ndinosiya uyu mubvunzo kuti iwe ufungisise ...
Sezvandambotaura, haisi AGL chete inova de facto system muindasitiri yemotokari, inoshandiswa kune e-board masystem kana makomputa, asi iripowo mumainjini uye zvimwe zvikamu zvemota, sezvo mota dzazvino Vanoshandisa zvemagetsi aids masisitimu anoda komputa iyo inowanzo kuve yakadzamirwa sisitimu ine microprocessor senge iyo PowerPC kudzora system yekudzora. traction kudzora, kugadzikana system, Etc.
Kuwedzeredzwa kweLinux kwakadai zvekuti ungangodaro usina kushamisika kana mota yako ichishandisa Linux kana kwete, asi asi mangani maLinux masisitimu ane mota yangu? Imwe, mbiri, nhatu, ... Kunyangwe mumakwikwi mapoka ezvikwata zvepamusoro zvemotokari yakadai seiyo Formula 1 vanoshandisa linux. Iwo emagetsi ekudzora mayunitsi (ECU) emota dzeF1 ane PowerPC QuadCore, yakadzamidzirwa system neLinux yekudzora kwema sensors ese, mudhiraivho uye telemetry yemota. ECU iyi inogadzirwa neMcLaren Electronics uye yakagadzikwa saka inoshandiswa nezvikwata zvese.
Avo vanopfuura Nhengo mazana matatu iyo yatakambotaura pakutanga muchikamu, ivo varipo kuti vabatirane pamwe nekugadzira LGA huru pachinzvimbo chekuti mumwe nemumwe aite gadziriro yakazvimiririra pachezvayo, iyo ingangodhura uye nemhedzisiro yakaipa kwazvo. Nekudaro, ivo vanotora huzivi hwenzanga ye open source uye vese vanopa zviyo zvavo zvejecha kugadzira gomo rakakura iro isu tese tinogona kunakidzwa naro mumotokari dzanhasi nedzamangwana.
Mhedzisiro yeiyi purojekiti, rese iri basa rekubatana ndiro iro UCB (Yakabatana Code Base) inomiririra 70% yeiyo yakazara OS, ndiko kuti, yakabatana yakavhurwa sosi sosi iyo inozoshandiswa gare gare nenhengo yega yega inochida, ichigadzirisa zvakakodzera, sekuwedzera mamwe mashandiro pane iyo hwaro, nzvimbo dzakasiyana, nezvimwe, mukati zvinoenderana nezvinodiwa zveumwe neumwe.
Kunyange zvakadaro ruzivo rwevashandisi kupera kunogona kuve kwakasiyana mune yega yega mota mamodheru uye mabhureki, mabheseni akafanana, achipa kusimba, kuchengetedzeka, uye zvisingaenzaniswi kuita. Ichi chinhu chakafanana nezvinoitika neGoogle's Android, vanoita kuti hwaro huwanikwe kune vagadziri, asi mugadziri wega wega seSamsung, Xiaomi, nezvimwewo, gadzira yakachinjika GUI kumaterminal avo, kune rimwe divi, mamwe akadai seterminal ivo pachavo Google, kana BQ, nezvimwe, vanosarudza kushandisa default interface.
Uye zvakare, mumakomputa ane AGL ari mumotokari, isu tichawanawo akateedzana e kunyorera zvakasiyana yakaiswa zvinoenderana neese anogadzira inofunga. Sezvo dziri mota dzakabatana, mota nyowani dziri kutengeswa dzinopawo mamwe masevhisi avo kana mabhenefiti ayo achafanirwa kuitwa nekubatanidzwa neAGL kuitira kuti vatsigirwe mumhando dzemotokari.
Somuenzaniso, ChiSweden brand Volvo, shandisa kumota dzavo dzinonzi Sensus Batanidza uye Kuchengetwa naVolvo. Yekutanga yakavakirwa paLinux, hongu, uye inopa yakangwara pane-bhodhi komputa ine zvakawanda zvingasarudzika zvekutyaira nekuvaraidza, sekuteerera mimhanzi yako yaunofarira neSpotify app iyo yakazvarwawo muSweden. nemidziyo yedu mbozha yatinotakura, nezvimwe.
Uye zvakare, kuburikidza ne X86-yakavakirwa SoC (Intel Atom), mamodheru eVolvo XC40 akwanisa kuenda nhanho kumberi uye vova mota dzekutanga chizvarwa chitsva kutengeswa nehurongwa hunodaidzwa kuti IVI (In-Vehicle-Infotainment) zvinobva mukubatana kwekambani yeNordic neGoogle , kuve piyona mumusika mune izvi uye kuratidza kugona kunogona kuunzwa neLinux kune chikamu chemotokari.
Rudzi urwu rwechirongwa zvinoreva kuve nevabatsiri mumotokari vane IA mutyairi anogona kusangana nayo achishandisa kucherechedzwa kwenzwi, kubatana ne gore, maapplication ekuvaraidza, kubatanidza sekunge isu taive needu smartphone, piritsi kana PC, GPS ine yemuno Google mepu, masystem ADAS (Yepamberi Mutyairi Rubatsiro Sisitimu) kubatsira kudzivirira tsaona, ruzivo rwakakodzera kune vafambi, uye zvimwe zvakawanda zvichauya ... Iyo hombe zvivakwa inoshanda nekuda kweLinux!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Linux iri kuve yakajairika system yemota
Zotero, chakanakisa chemuchinjika-chikuva bhaibheri rinotungamira maneja